ဝက်သားသုံးထပ်သားကင် | Wutyee Food House
« တို့ဟူး ကော်ရည်ဟင်းချို
September 19, 2010 by chowutyee ၀က်သားသုံးထပ်သားကင်
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 22 Comments	22 Responses
on September 20, 2010 at 8:33 am | Reply fatty
on September 20, 2010 at 8:34 am | Reply chowutyee
on September 20, 2010 at 8:59 am | Reply hmone
looking very nice…restaurant ka har nae tuu tal yummy…piggy ko lae treat par own, not fatty
on September 20, 2010 at 9:05 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ်.. ဖက်တီး စားတာများနေပြီ… ငါ့အမွှာလေးပဲ ကျွေးတော့မယ်…😛
on September 21, 2010 at 6:50 pm | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
စားချင်စရာလေးနော်။ လုပ်ရတာတော့ အချိန် နဲနဲယူရမဲ့ပုံဘဲ။ ကြည့်ရင်းနဲ့ စားချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ။း)))
on September 22, 2010 at 2:13 am | Reply chowutyee
လုပ်ရတာတော့ နည်းနည်း အချိန်ကြာပေမယ့် အရသာအရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်… အားရင် လုပ်စားကြည့်ပါအုန်း ကိုကိုမောင်..
on September 22, 2010 at 4:38 pm | Reply ကိုသားကြီး
လုပ်ရမှာတော့ အချိန်လည်းကြာတယ်.. ဒါပေမယ့် စမ်းကြည့်အုံးမယ်ဗျာ.. မ၀တ်ရည် ဆိုဒ်ကို မရောက်ဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ.. နေကောင်းတယ် ဟုတ်..
on September 23, 2010 at 1:42 am | Reply chowutyee
ကိုသားကြီးရေ အချိန်ကြာပေမယ့် စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် စမ်းလုပ်ကြည့်ပါအုန်းနော်… နေကောင်းပါတယ်.. ခုတစ်လော သိပ်မအားတာနဲ့ ဟင်းသစ်တွေ သိပ်မတင်ဖြစ်တာလောက် ပါပဲ…🙂
on October 9, 2010 at 1:49 am | Reply thida
ကောင်းလိုက်တာ.ဗိုက်တွေ အရမ်းဆာလာပြီ…ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ဒီလောက်ကောင်းနေရင်..လုပ်စားရင် တော်တော်ကောင်းမယ်..အရမ်းတော်တဲ့ မမ ပါပဲ။
on October 9, 2010 at 3:27 pm | Reply chowutyee
hee Thanks Thida!! Plz try it, it is really good taste!😉
on October 17, 2010 at 7:24 pm | Reply Kyaw Kyaw SS
Thanks for all your recipes,without your help we’ll be dead already.From china with 谢了您的作品 KKSS😀
haaa… Thanks KKSS too!😛
on January 27, 2011 at 10:50 pm | Reply haymar
၀တ်ရည်ရဲ့ blog ကို ခဏခဏ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပျင်းလို့ comment မရေးဖြစ်တာ။😛
ဒီဝက်သားကင်လေးကို အရမ်းကြိုက်တာပဲ။ ၀တ်ရည် ရဲ့ နည်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် oven ကို ၂၀၀ ဒီဂရီဆိုတာ တော်တော် အပူချိန်နည်းတယ်။ အိမ်မှာ 350 to 400 လောက်နဲ့ ကင်မှ ရတယ်။ နို့မို့ဆို ကျက်မှာမဟုတ်ဖူး။ ဒါပေမယ့် ခုမှစဉ်းစားမိတယ်။ ၀တ်ရည်က Celsius unit နဲ့ပြောတာမဟုတ်လား? အဲဒါဆို ၂၀၀ က ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။😉
နောက်ဆို အပူချိန်ရေးတဲ့အခါ unit လေးထည့်ရေးပေးရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။ (ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်)🙂
on February 5, 2011 at 9:42 am | Reply chowutyee
ဟေမာ ဘလောက်ကို အမြဲလာလည်တယ်ဆိုလို့ အထူးကျေးဇူးပါ။ ဟုတ်တယ် ၂၀၀ဒီဂရီ celsius ကိုပြောတာပါ… နောက် unit လေးတွေပါ ရေးပေးပါ့မယ်… ;D
on May 6, 2011 at 11:44 am | Reply nyonyohan
မ၀တ်ရည် အရမ်းတော်တယ်။ ရုပ်ကလဲချော။
on December 10, 2011 at 12:15 am | Reply Ei Mon
on December 10, 2011 at 11:25 am | Reply chowutyee
Five Spice powder ကို CityMart မှာလည်း ၀ယ်ယူလို့ ရပါတယ်..🙂
on January 6, 2012 at 5:17 pm | Reply တင်အောင်ဖြိုး
အမ ၀တ်ရည် Blog လေးကို အခုမှဝင်ကြည့်ဖြစ်တာပါ။အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ ချက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
on January 9, 2012 at 12:39 am | Reply chowutyee
Plz try it.. Thanks🙂
on May 12, 2012 at 5:18 pm | Reply mgmg
hi, wutyee ( from where) pls.
on September 16, 2013 at 4:55 am | Reply စိုင်းလောဝ်ခမ်း
ကျေဇူးတင်လိုက်တာဗျာ၊ နိုင်ငံခြားရောက်နေတုန်း မြန်မာဆိုတဲ့ အတိုင်း မြန်မာ ထမင်းဟင်းကလွဲရင် ဘာမှ စားလို့ မရလို့ အခက်ကြုံခဲ့ရ သမျှ ၀တ်ရည်ကျေးဇူးနဲ အေးဆေး ဖြစ်သွားပြီ။ ရှမ်းအစားအစာပါ တင်ထားပေးလို့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ။